Jariifka badda oo la mamnuucey
1 Dec 1, 2012 - 4:31:22 AM
Wasiirka wasaarada kalluumaysiga iyo khayraadka bada dowlada Puntland Eng.Maxamad Faarax Aadan oo la hadlayay Radio Garowe ayaa sheegay inay mamnuuceen Kaluumeysiga doonyaha shisheeye ay ka wadaan xeebaha Puntland oo dhowaanahan soo badanayey Jariifka Khayraadke badeena.
Wasiirka ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay sidii loogu garaabi lahaa kaluumaysatada Puntland oo ashtako ka ah maraakiib qowlaysato ah islamarkaasina hubaysan,wuxuna sheegay inay tilaabo cad ka qaadi doonan marakiibta jariifka ah ee ksoo qulqulaya xeebaha .
Maxamad Faarax Aadan ayaa cadeeyey inay heegan buuxa ugu jiraan ciidanka bada Puntland sidii gacnata loogu soo dhigi lahaa doonyadaha jariif badeedka ah ee ka socda wadamada Iiran iyo Yemen.
Go'aan kaani kasoo baxay wasarada kallumaysiga Puntland ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili cabashada ka soo yeeraysay kaluumaysatada Puntland ay cirka isku shareertay,taasoo ku aadan in wax laga qabto maraakiibta sida sharci darada ah uga kaluumaysanaya xeebaha.
Halkan ka dhageyso Cali Fantastic oo wareysanaya wasiirka kaluumeysiga More Articles